कटप्पा, कावेरी र कन्नड़विरोध - खबरम्यागजिन
Homeमनोरञ्जनकटप्पा, कावेरी र कन्नड़विरोध
May 3, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मनोरञ्जन 0
बाहुबलीका चर्चित क्यारेक्टर कटप्पा को हुन्?
खबरम्यागजिन डेस्क,3मई/2017
उनी 31 वर्षको उमेरमा साउथ इण्डियन मूभीका सुपरस्टार मानिने रजनीकान्तका बाबु बनेका थिए। रजनीकान्त त्यसबेला सत्यराजभन्दा चारवर्ष ठूलो थिए।
कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मारे ? बाहुबलीले छोड़िराखेको यो प्रश्नले प्रायः दुइवर्ष दर्शकहरूको मन-मष्तिष्कमा घर जमाएको थियो। साउथ इण्डियन मूभीको क्रेज र डिमाण्ड अहिले देशमै बढ़ेको छ। यही क्रेज र डिमाण्ड हेरेरै बलिउडले साउथका केही मूभीहरूको हिन्दीमा ‘फोटोकपी’ गरिसकेको छ। राम्रो कमाई गरेको छ। अहिले चर्चा छ, बाहुबली पार्ट -2 अर्थात् बाहुबली द कन्क्लुजनको। कटप्पाले बाहुबलीलाई मार्नुको कारणको। एक्शन र एक्टिङको। सबैभन्दा बढ़ी चर्चा छ 62 वर्षे कटप्पा अर्थात् सत्यराजको। बाहुबली पार्ट -2 अत्यधिक चर्चित बनेपछि कमाईका सबै रेकर्ड्स भङ्ग भइसकेको छ।
अहिले उनै कटप्पाले9वर्ष पुरानो बयानलाई केन्द्र गरी कन्नड़हरूसमक्ष माफी माग्दैछन्। कावेरी विवादबारे सत्यराजले तमिल कृषकहरूको प्रदर्शनलाई समर्थन गर्दै कन्नड़हरूविरुद्ध बयान दिएका थिए। त्यसबेला एक्टर सत्यराजले भनेका थिए, ‘‘तमिल मानिसहरू नै रूखहरूझैँ मौन बस्नुहुँदैन, जहाँ कुनै कुकुर आएर पिसाब गरेर जाओस्।’’ फिल्म चर्चित बनेपछि उनले9वर्षअघि दिएको यो बयान ‘भाइरल’ भएको छ। यसले फिल्मलाई ड्यामेज गर्नसक्ने डर सत्यराजलाई छ।
धेरै कन्नड़ सङ्गठनहरूले यसै बयानलाई केन्द्र गरी बाहुबली-2 को तीखो विरोध गरिरहेका छन्। यसैले कन्नड़हरूसँग उनले माफी मागिरहेका छन्। उनी भन्छन्, ‘‘म कन्नड़विरोधी कदापि होइन। मेरो उक्त बयानले कसैको भावनामा ठेस लागेको छ भने म माफी माग्दछु। यसका लागि बाहुबली टीमको मिहिनेतलाई क्षति नपुगोस्। म फिल्मको तुलनामा सानो कलाकार मात्र हुँ।’’ कावेरीको कारण कन्नड़विरोध सुनिरहेका बाहुबलीकै चर्चित क्यारेक्टर कटप्पा को हुन्?
संक्षिप्त परिचय यहाँ राखिएको छ।
200 भन्दा अधिक फिल्म खेलिसकेका कटप्पा उर्फ सत्यराजको असली नाम रङ्गाराज सुबय्या हो। उनको जन्म3अक्टोबर 1954 –मा चेन्नई, तमिलनाडुमा भएको थियो। सन् 1979 महेश्वरीसँग विवाह गरेका उनका एक छोरा सिबिराज र एक छोरी दिव्य छन्। छोरा सिबिराज एक्टर र छोरी दिव्य पेशाले न्यूट्रिशनिस्ट हुन्। फिल्मी करिअर सत्यराजले नेगेटिभ रोलबाट गरेका थिए। पछि एक्शन ड्रामा र कमेडी फिल्महरूमा पनि उनले सफल अभियान गरिसकेका छन्। बहुबली -2 पछि ‘मदाई थिरन्थु’ र ‘विजय 61’ –मा साउथका यी मानिएका एक्टरलाई देखिनेछ।
शाहरुख खान अभिनित चेन्नई एक्सप्रेसमा उनले दीपिका पादुकोणको पिताको भूमिकामा देखिएका थिए। यति मात्र होइन उनी 31 वर्षको उमेरमा साउथ इण्डियन मूभीका सुपरस्टार मानिने रजनीकान्तका बाबु बनेका थिए। रजनीकान्त त्यसबेला सत्यराजभन्दा चारवर्ष ठूलो थिए। अर्थात् 35 वर्षका। सत्यराजले भेधाम पुधिथु (1987), नादिगान (1990), पेरियार (2007), ओनबाधु रुबाई नोट्टू (2007), नाबान (2012), राजा रानी (2013) समेत धेरै फिल्ममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्।
यद्यपि उनले अत्यधिक चर्चा भने कटप्पाको भूमिकाले पाएका छन्। ‘‘ 24 वर्षको उमेरमा लोककथामा आधारित फिल्म खेल्ने इच्छालाई 60 वर्षको उमेरमा राजामौली (बहुबलीका निर्देश) –ले पूरा गरिदिए ’’, बहुबली अत्यधिक चर्चित भएपछि सन् 2015 मा दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा सत्यराजले यसो भनेका थिए।
हिगुइन चम्किँदा युभेण्टस विजयी
झाऱ्यो सेनाः सीआरपीको छापामारी जारीः सिंहमारीमा फाइरिङ-फेरि एकको मृत्युः जम्मा तीनको मृत्यु (37,456)
दार्जीलिङमा फेरि भड्कियो हिंसाः गोलीबारीमा एक पुलिस अधिकारीको मृत्युःजारी छ गोलीबारी (33,879)
विमल गुरूङले आज अचानक खुलासा गर्दै भने-दिल्लीले बोलाउँदैछ, गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने मात्रै जान्छुः गुरूङ उत्रिए सांसदको राजिनामा मागको विपक्षमा (31,175)
मोर्चाले केन्द्रलाई दियो अल्टिमेटमः भन्यो- 8 अगस्त6बजीभित्र केन्द्रले वार्ता बोलाएन भने9अगस्तदेखि आन्दोलन कठोर गर्नेछौँ (29,704)
अनिश्चितकालीन बन्द जारीः ‘हामी यो पाली पनि चुक्यौं भने एक चम्ची पानीमा डुबेर मर्दा हुन्छ’- विनय तामाङ (26,249)
विमल गुरूङले भने, ‘तयारी बस्नु, म आउँदैछु’ : विमलको स्वागतमा लाखौं जनता सडक उत्रने (23,460)
बङ्गालको विरोधमा उत्रियो मिजोरम (22,390)
पिसाबमा रगत बग्न थाल्यो, तरै पनि अनशनकारीहरू भन्छन्, दबाई होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ (21,622)
वरूण मृत्यु मामिलामा धेरैवटा सनसनीपूर्ण खुलासा: “मोर्चाको अर्को गुटले भनेको थियो, ‘तेरो दाजुलाई जेलबाट निकाल्नु छ भने हाम्रो गुटमा आइज, तर हामीले सम्झौता गरेनौँ’ (20,994)
केन्द्रिय गृहमन्त्रीको निम्तोः गोजमुमो-जीएमसीसी टोलीको दिल्ली प्रस्थान (20,867)
आज जे भयो, त्यसको दण्ड विनय र अनितले हन्ड्रेट टेन पर्सेन्ट पाउनेछन्, गोर्खाल्याण्ड माग्ने कोही छैन भन्ने देखाउन कुटपिट गरिएको हो- विमल गुरूङ (20,450)
बनियो राष्ट्रीय गोर्खाल्याण्ड समितिः अबको आन्दोलन बौद्धिक नेतृत्वले गर्नेछ-मुनिष तामाङ (19,591)
टिस्टा भेल्लीमा चार पुलिस कर्मी घाइतेः बतायो पुलिस र स्थानीयले बेग्लाबेग्लै कथा (19,549)
पवारले दिए गृहमन्त्रीलाई त्रिपक्षीय वार्ताको दबाउ: केन्द्रले चाँड़ै वार्ताको प्रस्ताव दिनेछ: राजनाथ (19,462)
गिरी टोली दिल्लीमाः मोर्चाको कार्यनीतिमा फेरबदलः केन्द्रले देशको सुरक्षाको हवाला दिएर मोर्चालाई सम्झौतामा ल्याउन सक्ने सूत्रको शङ्का (19,050)
बन्द खोल्ने नखोल्नेबारे निर्णय गर्ने दायित्व मोर्चाको हो- विमल गुरूङ (18,923)